Inona no atao hoe Plastic tsindrona koronosy - China QiDi Plastic hamolavola
Plastic tsindrona koronosy
Small tokantrano Appliance anjara
Astronomia teleskaopy faritra
Metal nohitsakitsahiko Parts
Hair faritra maina kokoa
Tafavory entana ho an'ny mpanjifa
Plastic tsindrona koronosy Atrikasa
CNC Machining Atrikasa
Inona no atao hoe Plastic tsindrona koronosy
Inona no atao hoe Plastic tsindrona koronosy?
Plastic tsindrona koronosy dia teknika ampiasaina hamolavola plastika ao amin'ny endriky ny zavatra ianao mikendry ny famokarana. Nandritra ny fampidirana dingana koronosy, thermoplastic polymers no nampidirany an-bobongolo lavaka. Mba hanaovana izany, bala ny zavatra mbola liana mba hahafahan'izy ireo ho any an-lavaka nampidirany tao amin'ny rano fanjakana. Io rano mafana avy eo sisa dia ho mangatsiatsiaka ao amin'ny lasitra toy izany koa ny anjara araka ny tokony ho afaka teo. Raha vao ampahany iray no nandroahana azy avy ao amin'ny lasitra, tsingerin iray hafa dia afaka manomboka avy hatrany.
Na tsindrona koronosy Azo ampiasaina ho an'ny metaly sy ny fitaratra, dia iray tena malaza dingana famokarana ho an'ny mpanamboatra plastika faritra.
Ny dingana amin'ny tsindrona koronosy ahitana dingana tsingerin'ny clamping, tsindrona, hihena sy ejection.
Nandritra clamping, ny fampidirana bobongolo dia voaomana ho amin'ny bisikileta amin'ny alalan'ny clamping mafy ny ampahany roa izay mamorona ny lasitra lavaka ho any toerana. Izany miantoka fa ny ampahany novolavolaina dia hanana malamalama Ny tena tsara tarehy, ary ny novolavolaina anjara tokony efa ho tsy misy tsipika izay ny ampahany samihafa niangona, toy izany dia mampiseho fa ny lasitra mba tsy ho ampy ny clamping mafy.
Raha vao ny lasitra dia clamped ampahany miaraka, ny bobongolo dia vonona ny hanangana anjara. Talohan'ny polymer no nampidirany tao an-lasitra, ny bala mbola liana mba hanangana ny rano. Ny rano dia avy eo polymer nampidirany tao an-lasitra amin'ny alalan'ny nozzle. Izany no sehatra ny fampidirana ny koronosy dingana, dia ny dingana faharoa amin'ny tsingerin'ny sehatra efatra.
Avy eo, ny ampahany sisa mba mangatsiatsiaka ao amin'ny lasitra ho efa voafaritra mialoha fe-potoana. Ny dingana hihena atao na aiza na aiza avy segondra vitsy ho minitra vitsivitsy miankina amin'ny polymer nampiasaina hamokarana-lova izany. Raha mila polymers sasany zara raha nisy fotoana mangatsiatsiaka mihitsy, ny hafa dia afaka maka minitra vitsivitsy. Izany dia miankina amin'ny ampahany ho novokarina.
Raha vao ny ampahany intsony angamba izy, ny fampidirana bobongolo misokatra sy ny anjara no nandroahana azy avy ao amin'ny lasitra. Ny bobongolo no clamp indray ka manamboara ho an'ny ny tsingerin'ny manaraka.
Satria mpanamboatra mahalala mandra-pahoviana ny tsingerina eo amin'ny lasitra ireo, dia afaka milaza mialoha araka ny marina ny habetsaky ny faritra ny lasitra dia miteraka ora rehetra. Izany dia manampy mpanamboatra mahafantatra mazava tsara ny isan'ireo faritra ry zareo ho afaka ny hamokatra isan'andro, isan-kerinandro sy ny volana amin'ny Functional tanteraka lasitra.
Post fotoana: Jul-10-2017
Inona no The Cnc Machining barahina Parts